Osimiri nke ụwa: njirimara na mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Oke osimiri nke uwa
Ihe mejupụtara ụwa anyị bụ mmiri gbara n’etiti oké osimiri. Ha bu nnuku mmiri buru ibu butere ndu n’elu uwa ka anyi siri mara ya taa. Niile oké osimiri ụwa ha nwere njirimara dị iche iche ma ọ bụ ya mere eji aha ha dị iche iche. Onye ọ bụla n’ime ha na-ebupụta ọtụtụ ụdị ihe dị iche iche dị iche iche dịka ọnọdụ gburugburu ebe obibi ha dị.
N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara oke osimiri ụwa na njirimara ha.
1 Kedu ihe bụ oké osimiri
2 Oke osimiri nke uwa
3 Ihe e ji mara na mkpa nke oke osimiri ụwa
Kedu ihe bụ oké osimiri
Nke mbụ bụ ịmara ihe oke osimiri ga-enwe ike ịmata ụdị ụdị dị iche iche dị na mbara ụwa. Mgbe anyị kwuru okwu oke osimiri, anyị na-emetụta ya na nnukwu mmiri na-ekpuchi ogologo ala. O nweghi oke ihe ọ bụla iji tụọ oke osimiri. Naanị anyị maara na ha nwere nnukwu ndọtị, ebe ha bụ ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụwa. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka mbara ụwa, anyị na-ahụ na naanị anyị nwere ike kee ya n'ime nnukwu mmiri nnu. Otú ọ dị, dịka njirimara dị iche na ebe ọ bụla na mbara ala, e kewara ha n'ụdị dị iche iche.
Mmasị nke ịkekọrịta oke mmiri nke na-ekpuchi ụwa anyị n'ụdị dị iche iche bụ ịdị mfe nke ịmụ ihe omimi.
Anyị ga-amata nke bụ oke osimiri nke ụwa na njirimara njirimara ha:
Oke osimiri Pasifik: Ọ bụ nke kachasị ukwuu ma nwee nnukwu mmiri dị kilomita cubic 714. Kwa afọ ọ na-ebelata otu centimita n'ihi mmegharị nke efere tectonic. Na agbanyeghị nke a, ọ ka bụ oke osimiri kachasị na mbara ụwa. Achọtawo ihe miri emi dị na mbara ala ahụ n'ime oke mmiri a. N'etiti ha anyị nwere oku Mariana trenchi.
Oke Osimiri Atlantic: ọ pere mpe karịa nke gara aga, tụrụ ntakịrị karịa ọkara. Agbanyeghị, ọ bụ ebe obibi n'ọtụtụ ebe mmanụ dị ma nwee njikọ dị mkpa n'etiti Europe na America. Otu ihe mmasi banyere data banyere oke osimiri a bu na obu ya nwere nnu kachasi.
Oke Osimiri Indian: Ọ bụ nke atọ kachasị ukwuu n'oké osimiri ụwa ma nwee mkpokọta 19.5% nke ngụkọta mmiri dị n'ụwa. Ọ pụtara maka ịnwe nnukwu akụ na mmanụ na gas. Ego a na-enye mmanụ emeela ka ọtụtụ mba bara ụba na Middle East.
Oke Osimiri Arctic: a na-ewere ya dị ka nke kasị nta na nke kasị mie emi n’ime omimi niile. Ma, ọ bụ oyi kacha oyi n’oké osimiri niile n’ụwa. Nabata ọtụtụ mmiri mmiri n'agbanyeghị ọnọdụ kachasị njọ. Ọ ghọwo otu n'ime oké osimiri kachasị mkpa maka usoro obibi obibi nke ọtụtụ ụdị ebe obibi ndị na-adịchaghị n'ebe ugwu. Ekele maka ọnọdụ gburugburu ebe obibi a pụrụ iche, a na-ahụ ọtụtụ ọnụọgụ jupụtara na anụmanụ.
Oke Osimiri Antartic: ọ bụ otu n’ime oke osimiri ikpeazụ nke ụmụ mmadụ ga-ekewa. Ihe ejiri mara ya bụ naanị otu nke gbara kọntinenti gburugburu. Ọ dịkarịa ala ụdị anụmanụ 10.000 na-achọta n'oké osimiri a ma nwee 50 okpukpu karịa carbon karịa ikuku ụwa.
Ihe e ji mara na mkpa nke oke osimiri ụwa
Ebe ọ bụ na enweghị oke oke ma ọ bụ ihe mgbochi na-ekewa oke osimiri, ọ na-egosi site na eserese na ọnụ ọgụgụ. Nke a dị mfe karị ịkọwa ọdịiche maka ọmụmụ ihe nke ịnye ụdị dị iche iche na ụdị dị iche iche nke ebe ọ bụla n'ime ụwa ụlọ. Dịka anyị kwuburu na mbụ, Oké Osimiri Atlantic bụ oké osimiri nwere ezigbo nnu. Nke a apụtaghị na ọ bụ mmiri dị iche na nke ụwa ndị ọzọ. Ma, ebe ọ bụ ebe nnu nnu na njirimara ndị ọzọ, ọ bụ ebe obibi maka ụdị osisi na ahịhịa ndị ọzọ. N'ihi ya, i nwere ike ibi ndu zuru oke mmiri a ka ị nwee ike ịmụ ha n’adabereghị.
Gafere kilomita ole na ole mmiri gbara gburugburu na mba, ọ nweghị gọọmentị nwere ike inwe oke osimiri ọbụla n'okpuru ya. Mba ọ bụla nweere onwe ha ịga n’oké osimiri ma ọ bụ site n’ikuku site na mmiri a. Maka nke a, enwere ụkpụrụ na iwu na-achịkwa ojiji na nrigbu nke oke osimiri iji kwado nchekwa ha na ojiji ha.
Oké osimiri bụ akụkụ ndị bụ isi nke ụwa anyị. Ọ bụrụ naanị na ha mụọ mmiri e guzobere, ọ ga-abụ ihe dị oke mfe, mana ọ bụ na n'ime ya enwere ụdị ndụ dị iche iche ma ọ werela njem ụmụ mmadụ iji wee chọpụta ya. N'agbanyeghị nke a, ọbụnadị taa, amabeghị ụdị niile ebe oghere dị ukwuu. N’ime mmiri niile dị n’ụwa, amachaghị ihe dị ka mmadụ ise. Ma ọ bụ na nyocha na gburugburu ebe obibi ndị a na-anọchite ọnụ ahịa akụ na ụba dị elu yana nnukwu ihe egwu maka ndị nyocha.
Enwere ike ikwu na oke osimiri nke uwa bu nri nke oke osimiri na osimiri. Ebe ọ bụ na mmadụ enweghị njirimara ndị dị mkpa iji nwee ike iru oke oke oke osimiri, iji ngwa teknụzụ dị mkpa. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere ike ibute ihe ọghọm ma ọ bụ ọnwụ mberede. Ihe ndị a bụ ihe kpatara ha jiri nwee ike ịmepụta rọbọt pụrụ iche iji mụọ cavities, eriri mmiri na mpaghara miri emi ebe ọkụ anaghị eru. N'ebe ndị a, ihe ize ndụ ka ukwuu. Ha abughi nyocha nke enwere ike ime n'usoro iwu ebe obu na ha choro ugwo onodu aku na uba na ego di elu. Na mgbakwunye, ebe ohere inyocha dị oke ụkọ, enwere ike ịchọta ihe puru iche na ihe dị na mbụ.
Ọnọdụ kachasị mụọ banyere oke osimiri ekpugherela eziokwu ole na ole ịmata. Ma ọ bụ na ụdị ndụ dị iche iche na-ebi n'ụlọ na-adabere kpam kpam n'ọnọdụ mmiri. Ọnọdụ ndị a bụ ọnọdụ okpomọkụ, nnu nnu, njupụta, nrụgide, na mmetọ. Mmetọ mmiri Ọ ghọwo nsogbu zuru ụwa ọnụ nke na-emetụta akụkụ kemịkal nke mmiri ahụ nke ukwuu. N’ụzọ dị otú a, oké osimiri ndị e metọrọ emetọ na-egbochi mmepe nke ọtụtụ ụdị ndụ na-akwado ahụ ike nke ihe ndị dị ndụ na ihe ndị dị ndụ.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oke osimiri ụwa na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke osimiri nke uwa